Ma Doorasho dadban, mase duudsi dadban. | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Ma Doorasho dadban, mase duudsi dadban.
18/09/2016 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxey Soomaalidu dalkeedii u burburisay diidid ay diidayso kaligii talis isagu howlihi dowladeed ku soo koobay shaqsiyaad isaga ka agdhow oo weliba ku aragti ah.
Waxey soo socotaba oo maalinba ay meel soo joogtaba maanta waxa ay mareysaa in la yiraahdo reeruhu ha isi soo doortaan oo qofkii iyaga meteli lahaa ha soo xushaan.
Halkaas loogama harine, waxaa loo suntay oday kaligii taliye ah oo aan dan ka leheyn danta dadka uu sheeganayo inuu madax u yahay, manaba yaqaanno wax la tashi la yiraa oo meeshiisa ayuu kaligii taliye ka yahay, dhuunta kaliya ayuuna wax ka maqlaa waxna ka arkaa. Yaa nool ma leh, yaa reerka mudan inuu metelo – Soomaalina wax u teri kara ma leh. Waxa uu arkaa oo kaliya waa inuu maanta uu wax kasta dhaafsado labo shilin, oo uu ku amar ku taagleeyo awoodda aysan reerkiisu u dhiiban ee ay danley daniista ah ay shalay danahooda uga faa’iideysteen.
Odayaashii qaabkaas ku yimid oo la yiri dadka soo kala xula maanta waxey maraayaan iyagoon la ganbaneynin inay yiraahdaan anigu ninkaas ayaan xilka Baarlamaanka u rabaa? Aaway doorashadi dadbaneyd ee ummadda loo sheegaayay? Ma weysan aheyn duudsi dadban?
Bal yaabnaye yaa iyaga yiri, qof siiya shaqo lawada lee yahay oo weliba la sheegay in loo tartamayo? Kuwo kuwaas ka mid ah oo iska dhigaaya odayaal xishoonaya ayaa waxey ku andacoonayaan “shalay ayaan hebel ka ballan qaaday” waa yaabe, ma wax uusan isagu laheyn ayuu qof kale u ballan qaadi karaa?
Haddii sida ay hadda ku socoto ay ku sii socoto, oo aan qaabka dadka wax dooranayo iyo kuwa u tartamaya doorashada aan si cad loo kala saarin oo kii la dooranayay oo dadkii wax kala dooranayay uu isagu soo xulayo, oday ku sheeguna uu u ansixinaayo, waxey u egtahay inayan meeshaas wax doorasho ah aysan jirin ee ay tahay duudsi dadban.
Waxaanse rajeynayaa inaan oday ku sheegaan danta gaarka ah loo duubay oo aysan ceebtu wax ka dhimin oo adeegaha u ah kuwii isaga shalay sameeyay aan sanadkaan looga hari doonin wuxuu sameeyo oo weliba lala mari doono meel kasta oo loo arko in lagu heli karo wax u eg doorasho dadban inta laga gaarayo doorasho toos ah.
Oday haddii aad is leedahay laguma oga dadka aad beenta ku metesho iyo Soomaaliba waa kuu jeedaan ee taariikhda meesha aad ka geleyso ka fiirso. Ogow berri baa jirta, kuwaad hadda ku tumaneyso ayaa laga yaabaa inay kaaga roonyihiin kuwa aad u xaglineyso ee xaqqa taageer. Xaaraan haddii lagu bullaalaayo horaa loo arki lahaaye xaqqa taageer. Maantood xaq wax u maamushaa waxey dhali berri oo laguu soo wada haanyoodaahe xaqqa taageer.
Haddii aad diidana ogow inta aad dad ku maqan tahay adigana waa lagugu maqan yahay ee waxaan dadka kala qaban oo aan weligeed la isu calool fayoobaan ha ku kicin, maanteyna ku mutatee meel aysan laheyn ha marsiin.
Soomaali wax anfaca oo aan baarlamaanka u arkin meel ilmaha laga biisho oo maqaayadaha looga sheekeeyo oo xil kas ah, ilaahey xilkaas ha u dhiibo si ummaddaani asaagood wax ula qeybsadaan.
Ilaahow horumar ayaan kaa barinay oo weliba barakeysan oo aad raali ka tahay.
W/Q: Cabdixakin Cali Casir
« Guddiga Doorashooyinka: Qof isagu wax raba, wax qeybintiisa ma lagu kalsoonaan karaa?
Dib u habeyn in lagu sameeyo qaabka waxbarashada dalka loo maamulo, waxey keeni kartaa in la helo waxbarasho tayeysan oo weliba la isku haleyn karo joogtana ah. »